Monte Alago Apartments - I-Airbnb
Le ndlu yindawo yokuphosa ilitye ukusuka eMonte Alago kunye nemizuzu embalwa ukusuka kwiziko lembali laseNocera Umbra, indawo efanelekileyo kwabo bangafuni kuphoswa nantoni na! Inamagumbi okulala ayi-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, i-terrace, ikhitshi, indawo yokuphumla kunye neyokupaka. Kwi-Nocera Umbra ungonwabela ukutya kwe-Umbrian, ukudlala imidlalo engqongwe yindalo (ukuhamba intaba, intenetya, ukutyibiliza ngengca, ukukhwela ihashe), phumla echibini okanye uhambe kwiziko lembali kwaye ufumane imbali yethu kunye neziganeko. Indawo entle yokutyelela i-Umbria.
Indlu imalunga ne-100 square metres, kunye nomnyango ozimeleyo kunye nokupaka. Kufuneka unyuke izinyuko ukuze ufikelele.
Indlu, ngaphakathi, abe yokungena encinane, 1 ikhitshi, 1 egumbini kunye eziko ithala itafile nezitulo ngenxa lokutyela yangaphandle, 1 yokugcina, zokuhlambela 2 okulala-2, omnye kabini enye kunye neebhedi ezimbini single ukuba nibe kuwumbi ukuba kuyimfuneko.
Onke amagumbi okulala ane-dresser, i-wardrobe ene-hangers, ilinen ecocekileyo. Amagumbi okuhlambela axhotyiswe ngeetawuli, isepha yesandla kunye nephepha langasese.
Ikhitshi ine-oveni yombane, i-microwave, ihob, ifriji kunye nazo zonke izinto eziyimfuneko zokupheka, ezinjengeembiza, iileyile, izinto zokusika, iiglasi, iipleyiti, njl.
Kuzo naziphi na iimfuno okanye imibuzo unganqikazi ukunxibelelana nathi, siya kukuvuyela ukuphendula yonke imibuzo yakho kwaye sihlangabezane neemfuno zakho.
Indawo yokuhlala ibekwe ecaleni kwendlela ekhokelela eMonte Alago, indawo ebalaseleyo kwabo bafuna indawo ezolileyo kwaye kwangaxeshanye ingekude kakhulu kumbindi wesixeko.
Ngexesha lokuhlala kwakho siya kuba sinakho ukukunika ulwazi kunye neengcebiso malunga nento omawuyenze okanye omawuye kuyo, okanye ngayo nayiphi na enye imfuno.